Samachar Batika || News from Nepal » जन्मेको २४ घण्टा भित्र, शिशु किन रुनै पर्छ ? नरोए के हुन्छ ?
जन्मेको २४ घण्टा भित्र, शिशु किन रुनै पर्छ ? नरोए के हुन्छ ?
जब बच्चा जन्मन्छ, यो संसारमा आउने बित्तिकै ऊ ठूलो स्वरमा रुन्छ। उसको यो रुवाई नै ऊ जन्मेको संकेत हो। तर कहिलेकाँही बच्चाहरु जन्म पछि रुने गर्दैनन्, जुन् कुरा सामान्य हो।
तर के जन्म लिए पछि बच्चा रुनु आवश्यक छ? यस प्रश्नको उत्तर प्रायः सबै आमाबाबुलाई थाहा होला , तर के तपाईंलाई थाहा छ बच्चा जन्मेको २४ घण्टा भित्र पहिलो पटक रुनु किन महत्त्वपूर्ण छ? यो कुरा थाहा पाउँनुहोस् कि नवजात शिशुको लागि जन्म लिँदा रुनु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ।जन्म लिएपछि बच्चा रुनु किन छ त आवश्यक?
प्रकाशित मिति १९ बैशाख २०७८, आईतवार १२:५३